Igadi yasekhaya, Ukukhula kweziqholo nemifuno Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
1 Izibonelelo zegadi yasekhaya
2 Umgangatho ongcono kwaye usempilweni
3 Iingcebiso zokuseka igadi yasekhaya
3.1 Ukutya okufanelekileyo kakhulu
3.2 · Oregano
3.3 · Irosemary
3.4 · IBasil
3.6 · ICilantro
4 Iingcebiso ezibalulekileyo
Izibonelelo zegadi yasekhaya
Ukwenza igadi yasekhaya kunika izibonelelo ezininzi. Kwabaqalayo, impilo yakho iyaxatyiswa, emva kwayo yonke loo nto, uyakuqinisekisa ukusetyenziswa rhoqo kokutya okungenazintsholongwane.
Igadi yasekhaya iququzelela kwaye ivuselele ukutyiwa kokutya kwindalo ngokwenza ukupheka, ukukhuthaza umgangatho wokutya.
Njengoko kuphekwa ngakumbi ekuphekeni ekhaya, umkhwa kukutya ukutya okuncinci okucwangcisiweyo ngokubanzi.
Umgangatho ongcono kwaye usempilweni
Ngokwexabiso lesondlo, akukho mahluko phakathi kweemveliso ezikhuliswe ekhaya okanye iimveliso ezithengiweyo. Kodwa uzuza kumgangatho, kuba ukutya okulinywe ekhaya kunempilo kunoko kufunyanwa kwizityalo.
Ipokotho yakho ikwava ifuthe elihle: ngokutyala imifuno yakho, uyonga xa uthenga. Ngaba ufuna ezinye izibonelelo? Igadi isebenza njengesihombiso kwindalo esingqongileyo kwaye, kwabo banabantwana, yindlela entle yokubafundisa ukuhlonipha nokuyithanda indalo kunye nokusingqongileyo.
Iingcebiso zokuseka igadi yasekhaya
Abo bahlala emakhaya bahlala benendawo engakumbi yokuqalisa igadi. Yonke into oyifunayo kukufuna ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, kunye namaxesha omthunzi imini yonke.
Kodwa ukuba uhlala eflethini, ungakhathazeki: kunokwenzeka ukuba ukonwabele zonke izibonelelo zesitiya semifuno ngokusebenzisa indawo encinci yekhitshi okanye usete igadi ethe nkqo ebhalkhoni. Ukuba kukho ukukhanya okukhulu, imifuno kunye nembotyi zingakhuliswa. Ukuba akunjalo, yiya kwimifuno kunye neziqholo.
Into oyifunayo kukukhetha into ofuna ukuyityala kwaye uyibeke kwiimbiza ezincinci ezixhonywe nkqo eludongeni. Awungekhe ukhule imifuno emikhulu kakhulu, kodwa ngokuqinisekileyo yongeza incasa ngakumbi kwiitya zosapho.
Kwigadi yakho, ungasebenzisa iimbiza zeentyatyambo, ukuphinda usebenzise ukuphakheja okunje ngeebhotile zezilwanyana kunye neijagi zeice cream, izixhobo zokutyala kunye neebhokisi zomthi. Ungakulibali ukugqobhoza ezantsi kwezikhongozeli ukuthintela amanzi agqithisileyo, kunye nesanti kwizitya ezigcina iimbiza ukunqanda ukwanda kwengcongconi yedengue. Ukuba unesitiya, unokutyala ngqo emhlabeni.
Ufuna kwakhona i-substrate, umhlaba onokusebenza njengokutya kwezinto eziphilayo, kunye nembewu okanye izithole ofuna ukutyala.
Ukutya okufanelekileyo kakhulu
Izinto ezahlukeneyo kunye nokuphantse kube ngamxhelo mnye. Isebenza kakuhle ngokutya okugcadiweyo kunye nemifuno kunye neesosi. Uthanda imozulu epholileyo kwaye ilanga ininzi, inamanzi amodareyithayo kunye rhoqo.
Kulula ukukhathalela kunye nokukhetha amaqondo obushushu alungeleleneyo, ke akukho nto igqithisileyo kwirosemary. Ifuna ukunkcenkceshelwa rhoqo ekuqaleni. Emva koko inokufikelela kwiintsuku ezintathu ngaphandle kwamanzi. Ukuvuna kuthatha iinyanga ezintathu emveni kokutyala. Kuhamba kakuhle nenyama, intlanzi kunye nemifuno ehovini.
Ikhula kakuhle kwindawo ezifudumeleyo kunye nelanga. Unkcenkceshelo kufuneka lube rhoqo, kodwa ngomthamo wamanzi ophakathi. Xa amagqabi evela, gawula ngokulandelelana kwawo njengoko ethatha amandla esityalo.
Ixhaphake kakhulu kwindawo yokutya yaseBrazil, iichives zifuna amaqondo obushushu aphakathi kwe-13 ° C kunye ne-24 ° C. Yiyeke le imifuno elangeni iiyure ezimbalwa yonke imihla kwaye musa ukugcwala emanzini. Umhlaba kufuneka ube manzi rhoqo, kodwa ungaze ube soggy.
Ifuna ukusetyenziswa kweziqwengana ezikhanyayo kunye neasidi engathathi hlangothi. Tyala imbewu ngokulandelelana kwaye unkcenkceshele rhoqo. Ungaze ushiye lo mfuno ungenamanzi. Amahlumela okuqala azalwa kwiiveki ezimbalwa emva kokutyala.
Imbewu, ngokubanzi, inoluhlu olukhulu lokukhetha, ziphantsi kwiindleko, kwaye ziyafikeleleka. Nangona kunjalo, inkqubo yokutyala nokukhula iya kuba nde kwaye inde kunaleyo yesithole.
Ukuba ukhetha ukuhlwayela, imifuno iya kuba kwinqanaba eliphezulu lophuhliso kwaye ixesha lokulinda lokusetyenziswa kwayo kwiiresiphi kunye namalungiselelo aya kuba mfutshane.
Kubalulekile ukwazi iimfuno zokukhanya kunye namanzi kwisityalo ngasinye.
Ukuba usebenzisa iimbiza, khetha ubungakanani obuchanekileyo nobunzulu ukunceda ukukhula kweengcambu zesityalo. Kulumkele iimodeli ngaphandle kwemingxunya, njengoko amanzi efuna ukukhutshwa.